13 izimpawu zezinkinga zenhliziyo okufanele uzikhathaze ngazo - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Ezempilo Ukuphuma Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani Inkampani, The Checkout Izindaba, Wellness Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo Izindaba Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Ukuphila Kahle
Main >> Imfundo Yezempilo >> 13 izimpawu zezinkinga zenhliziyo okufanele uzikhathaze ngazo
13 izimpawu zezinkinga zenhliziyo okufanele uzikhathaze ngazo
Wonke umuntu uyazi ukuthi ukuchoboza ubuhlungu besifuba ngokuvamile kuyisibonakaliso sokuhlaselwa yinhliziyo. Kepha kunezinhlobo ezithile zezifo zenhliziyo ezinezimpawu ezicashile kakhulu.
Thatha lesi siguli esaya kudokotela mayelana nobuhlungu behlombe nobuhlungu. Udokotela wakhe wamtshela ukuthi akhulule umthwalo wakhe, futhi aphathe isikhwama sakhe semali ngaphesheya. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ubuhlungu babungakapheli. Lona wesifazane wayobheka uMartha Gulati, MD, oyisikhulu se-cardiology e-University of Arizona College of Medicine ePhoenix. Impela, uDkt Gulati uthole ukuvimba emithanjeni yakhe.
Kubalulekile ukuthi unake okungaphezu nje kwezinkinga zakudala.
Izinhlobo ezivame kakhulu zesifo senhliziyo
Isifo senhliziyo yisikhathi sesambulela esihlanganisa izinhlobo eziningana zezinkinga zenhliziyo:
Isifo semithambo yegazi: Isifo somthambo iCoronary yisifo senhliziyo esivame kakhulu. Kuba lapho kunenqwaba ye-LDL (cholesterol embi) emithanjeni yakho. Uma kungalawulwa, lokhu kungaholela ekuboshweni kwenhliziyo nasekufeni.
Ukwehluleka kwenhliziyo yokubopha:Lokhu kwenzeka lapho imisipha yenhliziyo yakho ibuthakathaka kakhulu futhi iphampa kancane noma ingcindezi ephezulu kakhulu. Mayelana Abantu abayizigidi ezi-5 ulwa nokwehluleka kokuqina kwenhliziyo e-U.S, kanti abangaphezu kwengxenye bafa kungakapheli iminyaka emihlanu betholakele.
Isifo senhliziyo iValvular: Lapho elinye lamavalvu enhliziyo amane lingasebenzi kahle, kungaba ngenxa yokugula, ukukhubazeka kokuzalwa, noma ukulimala kwenhliziyo ngokuhamba kwesikhathi, uzothola isifo senhliziyo se-valvular. Ikona okuvame kakhulu kubantu asebekhulile , futhi ayivamile kakhulu kunezinye izifo zenhliziyo. Abanye abantu bangahamba impilo yabo yonke bengazi ukuthi banenkinga ye-valve.
I-atherosclerosis: Yilapho i-plaque yakhela khona ezindongeni zemithambo yakho. I-atherosclerosis ithinta cishe abantu abayizigidi ezintathu minyaka yonke. Imvamisa ayinazo izimpawu futhi kungenzeka ingaze idale inkinga, kepha ingaholela ekuhlaselweni yinhliziyo uma ingalashwa.
I-Arrhythmia : Yilapho inhliziyo yakho ishaya ngokushesha okukhulu, ihamba kancane kakhulu, ingajwayelekile, noma yeqa amabhithi. Ngenye yezimo zenhliziyo ezivame kakhulu futhi kaningi akuyona imbangela yokukhathazeka. Kodwa-ke, abantu abadala abanezinye izinto ezinobungozi bangafuna ukuthatha i-blood thinner ukuvikela imivimbo. Uma ingalashwa, kungaholela ekuboshweni kwenhliziyo.
Umfutho wegazi ophakeme noma ophansi:Yize empeleni singesona isifo ngokwaso, umfutho wegazi ophakeme ingenye yezimo ezivame kakhulu emhlabeni. Ingalawulwa ngemithi, futhi kufanele — izinkinga zomfutho wegazi ezingahloliwe zingadala ukuhlaselwa yinhliziyo, isifo sohlangothi kanye nesifo semithambo yegazi.
Ziyini izimpawu eziyisixwayiso sesifo senhliziyo?
Izimpawu ezahlukahlukene zingakhombisa izinhlobo ezahlukene zesifo senhliziyo. Bheka lezi zimpawu ezingabonakala zingenacala, kepha zingakhombisa ukuthi impilo yenhliziyo yakho isengozini.
1. Ukukhathala okukhulu
Kungakhombisa: Isifo semithambo yegazi; ukuhluleka kwenhliziyo; isifo senhliziyo se-valvular
Kunezimo eziningi ezingadala ukukhathala. Kodwa-ke, ukukhathala okuqhubekayo, okungaqondakali kungaba uphawu lokuthi inhliziyo yakho ayishayi kahle, noma ihlangabezana nenye inkinga — njengokuvaleka noma inkinga ye-valve.
2. Ukuphefumula kancane
Kungakhombisa: I-Atherosclerosis; isifo semithambo yegazi; ukuhluleka kwenhliziyo; isifo senhliziyo se-valvular
Impela, ushaywa umoya kalula uma uphume kancane esimweni, kodwa ungasuki ngokushesha okukhulu. Uma uzithola uhefuzela umoya ngemuva kokuzikhandla okuncane, njengokuhamba uye emotweni noma ukhuphuke izitebhisi zangaphambili, kungahle kuhlobene nenhliziyo.
3. Shintsha ekubekezeleleni ukuzivocavoca umzimba
UJohn Osborne, MD, umqondisi we-cardiology e-LowT Center / HerKare kanye nevolontiya le-American Heart Association (AHA), uhlala ebona iziguli ezingagunda utshani kalula ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kodwa manje ziyahlupheka-futhi zigcina zinezifo zenhliziyo . Uma imisebenzi ebikade ingenabuhlungu manje inzima, cabanga ukubona udokotela.
4. Ukukhathazeka kokugaya ukudla
Kungakhombisa: Isifo semithambo yeCoronary
Ukuba nekhanda elikhanyayo, isicanucanu, ukuhlanza, noma ubuhlungu besisu kungaba yizimpawu ezivamile zokuhlaselwa yisifo senhliziyo — ikakhulukazi kwabesifazane, abavame ukuba nezimpawu ezehlukile kunezabesilisa. Kungaqala ngomqondo ongacacile wokungazizwa kahle endaweni yokugaya ukudla noma isilungulela, kepha lokhu, kanye nokugqamuka izithukuthuku ezibandayo, kungakhombisa isifo semithambo yenhliziyo.
5. Lala i-apnea, uhona noma uvuke ebusuku
Kungakhombisa: I-Arrhythmia ; isifo semithambo yegazi; ukuhluleka kwenhliziyo
Isifo senhliziyo singaba ngemuva kokulala kwakho ebusuku. Ukuhamba kwegazi lakho nokushaya kwenhliziyo kuyashintsha lapho uya kolala lapho konke kusebenza ngokujwayelekile. Uma kukhona okungahambi kahle, kungaba ukukuvusa ngo-1 ekuseni Ukwehluleka kwenhliziyo kungadala ukuphefumula kokulala noma kwenze uketshezi lukhule emaphashini, futhi i-arrhythmia ingakwenza uzizwe sengathi inhliziyo yakho iyagijima — kokubili okungaphazamisa amaphupho akho.
kungakanani ukuvakashelwa ngokunakekelwa okuphuthumayo ngaphandle komshwalense
Ukulala ukwelashwa kwe-apnea nemithi
Kungakhombisa: Ukwehluleka kwenhliziyo yokubopha; isifo senhliziyo se-valvular
Ikakhulukazi emilenzeni, emaqakaleni, noma ezinyaweni, ukuvuvukala kungaba uphawu lokwehluleka kwenhliziyo. Uma ukhukhumele kakhulu kangangokuba umunwe wakho ushiya i-indent lapho uthinta umzimba wakho, kungaba yisikhathi sokubuza kochwepheshe bezokwelapha.
7. Ukungaphatheki kahle kwesifuba noma i-angina
Kungakhombisa: I-Atherosclerosis; isifo semithambo yegazi; isifo senhliziyo se-valvular
Imizwa yokukhama, ukuqina, ingcindezi, noma isisindo kungaba yizimpawu zokuthi kukhona okungahambi kahle enhliziyweni yakho. Abantu bavame ukuchaza ukukhathazeka kwenhliziyo njengokuzwa sengathi indlovu ihleli esifubeni sabo.
8. Amajaqamba emilenze
Ubuhlungu bomlenze, noma ukuhamba kanzima, kungaba uphawu lokuthi ukujikeleza kwegazi kwakho kuphazamisekile. Isitho esikhulu sokugeleza kwegazi? Inhliziyo yakho.
9. Isigqi senhliziyo nesilinganiso soshintsho
Kungakhombisa: Umfutho wegazi ophakeme noma ophansi, ukuminyana kwenhliziyo okucinanayo; isifo senhliziyo se-valvular; i-arrhythmia
Lapho ukushaya kwenhliziyo yakho kuzwakala kungavamile — kushesha kakhulu noma kungalingani — lokho kubizwa ngokuthi ukushaya kwenhliziyo. Kungumuzwa ofana nalapho uke waba ne-caffeine eningi kakhulu noma uzizwa uthukile. Kepha uma uhleli nje ufunda incwadi, futhi inhliziyo yakho iqala ukugijima, kungasho ukuthi usengozini yesifo senhliziyo.
10. Ubambo lwehlombe, ingalo, intamo, iqolo, isisu, noma imihlathi
Kungakhombisa: I-Atherosclerosis, isifo semithambo yegazi
Lapho inhliziyo yakho ibhekene nobunzima, ingenza ezinye izitho zomzimba wakho zikhale ngezinhlungu. Ubuhlungu bengalo uphawu lokuhlaselwa yinhliziyo okudala, kepha futhi kungenzeka emahlombe, emuva, esiswini, noma emhlathini.
11. Isizungu noma ikhanda elikhanyayo
Kungakhombisa: I-Arrhythmia; umfutho wegazi ophakeme noma ophansi; ukuhluleka kwenhliziyo; isifo senhliziyo se-valvular
okungcono ukukhathazeka i-hydroxyzine hcl vs hydroxyzine pam
Ukuzizwa uphela amandla ngokuvamile kusho ukuthi akukho ukugeleza kwegazi okwanele okuya ebuchosheni. Ngenkathi kunezimbangela eziningi, ukusebenza kwenhliziyo okungajwayelekile kungaba yinye yazo — ikakhulukazi uma uzizwa unesiyezi lapho usukuma.
12. Ukukhwehlela okungapheli
Kungakhombisa: Isifo semithambo yegazi; ukuhluleka kwenhliziyo
Ukwehluleka kwenhliziyo kungenza uketshezi lukhule emaphashini akho, okungadala ukukhwehlela noma ukuphefumula.
13. Ubuthakathaka emaphethelweni
Ubuthakathaka emilenzeni buhambisana nokushintshwa kokubekezelela ukuvivinya umzimba nokuphefumula okuncane. Kungaba uhlobo lokukhathala oluhambisana nenkinga yenhliziyo.
Uma uhlangabezana nanoma yiziphi kulezi zimpawu ezingenhla zesifo senhliziyo — kungaba buhlungu noma zibe zimbi ngokuhamba kwesikhathi — qala ngokuyeka okwenzayo ulinde ukuthi kuxazululwe. Ngemuva kwalokho, shayela udokotela wakho wokunakekela oyinhloko bese wenza i-aphoyintimenti ukuze uyihlole. Uma ingaxazululi futhi uqala ukuzwa ezinye izimpawu eziphuthumayo, njengobuhlungu obukhulu kakhulu noma ukuhamba kanzima, iya egumbini lezimo eziphuthumayo.
Ziyini izimpawu eziyisixwayiso zokuhlaselwa yisifo senhliziyo?
Ukuhlaselwa yinhliziyo kuyisimo esiphuthumayo. Hlala ubheke lezi zimpawu ezivamile ukuze uzisize wena noma abanye.
Ubuhlungu besifuba. Lokhu kungabonakala njengokucindezela kwesifuba, ukukhama, ukungakhululeki, noma umuzwa wendlovu esifubeni sakho, kusho uDkt Gulati.
Ubuhlungu bengalo. Lokhu kufaka umhlathi wakho, ihlombe, nengalo, futhi imvamisa iba sohlangothini lwesobunxele; kungabekwa endaweni eyodwa.
Izinkinga zesisu. Lokhu kufaka phakathi ukugaya isisu, isilungulela, i-asidi, isicanucanu, ubuhlungu besisu, noma i-reflux engahambelani nokudla, ikakhulukazi esimweni sokuhlaselwa yinhliziyo buthule, kusho uDkt Osborne.
Ubumhlophe. Uma unesiyezi, unekhanda elikhanyayo, noma udlula emhlabeni, lokho kuwuphawu lwesimo esiphuthumayo.
Ukujuluka. Lokhu kuvamise ukubonakala njengezithukuthuku ezibandayo, kepha noma yikuphi ukujuluka okweqile okungazelelwe ngaphandle kwesixwayiso kuyisibonakaliso.
Ukuphelelwa umoya. Lokhu kufaka ubunzima bokuthatha umoya ojulile noma izimpawu ezifana ne-asthma.
Ukukhathala. Inhliziyo yakho elwela ukukugcina uphila ingakwenza ukhathele kakhulu ngokushesha okukhulu.
Yini okufanele ngiyenze uma mina noma umuntu engimthandayo ehlaselwa yisifo senhliziyo?
Uma usola ukuthi wena noma othile oseduze kwakho uhlaselwa yisifo senhliziyo, udinga ukuthatha isinyathelo ngokushesha. Okokuqala (futhi okubaluleke kakhulu), shayela ku-911. Ungazami ukushayela wena noma omunye umuntu omaziyo esibhedlela. Ngenkathi i-ambulensi isendleleni, thatha lezi zinyathelo uma uhlaselwa yisifo senhliziyo:
Hlahla i-aspirin. Lokhu kuzosiza ekunciphiseni igazi bese kuqala ukwephula amahlule egazi abangela izingqinamba.
Vula umnyango. Uma uwedwa futhi udlula emhlabeni, abosizo lokuqala basazokwazi ukungena kalula.
Misa okwenzayo bese uzama ukukhululeka. Udinga ukususa ngokushesha noma yikuphi ubunzima obengeziwe enhliziyweni yakho, ngakho-ke hlala noma ulale. Uma ukukhwehlela kanzima noma ukushaya isifuba sakho kukusiza uzizwe ungcono, kwenze, kodwa uDkt Osborne uyaphawula ukuthi akwenzi mehluko ngempela ekuhlaselweni yinhliziyo.
Uma kungeyena onesifo senhliziyo, phatha i-CPR uma kunesidingo.
kadokotela uvithamini d vs ngaphezu kwekhawunta
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana nezimpawu zenhliziyo
Kuyini ukushaya kwenhliziyo okuyingozi?
Ngokuvamile, ukushaya kwenhliziyo okunempilo kuphakathi kuka-60 (noma u-50 uma uphilile ngempela) nokushaya okungu-100 ngomzuzu — ngakho-ke noma yini engenhla noma engaphansi kwalezo zinombolo ingaba yinkinga. Kuwo womabili umkhawulo wobubanzi, ungahle uzizwe unesiyezi, uqulekile, noma unekhanda elikhanyayo, noma udlule emhlabeni, kusho uDkt Osborne. Uma ingaphezu kokushaya okungu-100 ngomzuzu, yilapho ungaba khona nobuhlungu besifuba nokuphefumula okuncane.
Noma ngabe yikuphi, noma kunjalo, phezulu noma phansi, iya kudokotela. Ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile kulawa mazinga kungasho izinkinga ze-thyroid, ukwehluleka kwenhliziyo, i-fibrillation ye-atrial, noma ezinye izimo.
Ingabe izimpawu zesifo senhliziyo zingahlala izinsuku?
Lapho sizwa ngokuhlaselwa yinhliziyo, ngokujwayelekile kuyinto evela ngokungalindelekile futhi ebingalindelekile. Kodwa ezinye izimpawu zenhliziyo — kuye ngesimo — zingahlala izinsuku ezimbalwa.
Wonke umuntu wehlukile, kusho uDkt. Gulati. Kwabanye abantu, izimpawu zizovela ngokuzumayo, futhi lokho kuvame ukuthi kusho ukuthi mhlawumbe iqabaka liqhekekile noma okuthile okuqale ukuqhuma kwe-thrombus noma ukwakheka kwegazi. Kodwa abanye abantu bangaba nezimpawu eziqhubekayo ze-angina [ukwehla kwegazi kuye enhliziyweni] okuvele kube kubi ngokuhamba kwesikhathi. Kungaba ukuphendula ezimweni ezicindezelayo noma kokubili ukukhathazeka ngokomzimba nangokomzwelo kungakuletha.
Isibonelo, ungathola isisindo sesifuba ngenkathi uhamba, kodwa siyaphela uma uqala ukuphumula. Noma ungaba nobunzima besifuba nokuphefumula okuncane, futhi uzizwe ushisa ngokweqile futhi ujuluke lapho uzivocavoca umzimba — ngakho-ke uyeka.
Lokho kuvame ukuba yizimpawu zokuxwayisa ukuthi kukhona okwenzekayo, kusho uDkt. Gulati. U-Angina wethula ngezindlela eziningi ezahlukahlukene kubantu abahlukahlukene. Abanye abantu, kuzoqala kungazelelwe futhi abakaze babhekane nophawu phambilini, nakwabanye abantu, kungenzeka ukuthi babehlangabezana nezinto ezincane kodwa ezicashile obezilokhu ziba zimbi kancane kancane.
Ezinye izimpawu ezingahlala izinsuku ezimbalwa noma izinyanga, kusho uDkt. Osborne, kufaka phakathi ukuvuvukala, ukuvuka uphefumule ebusuku, ukungakwazi ukulala ubuthongo, ukuphefumula, nokungakwazi ukuphefumula kanzima.
Kufanele ngikhathazeke nini ngokushaya kwenhliziyo?
Noma zingasabeka ngaleso sikhathi, ukushaya kwenhliziyo akuvamile ukuthi kube yinto okufanele ikhathazeke ngayo. UDkt. Gulati uthi abanye abantu bazi kakhulu ukushaya kwenhliziyo yabo kunabanye futhi maningi amathuba okuthi babone ukushaywa okweqiwe noma okunye ukushaya kwenhliziyo. Kodwa yena noDkt. Osborne bobabili bayavuma ukuthi sekuyisikhathi sokufuna usizo lwezokwelapha lapho lokho kushaya kwenhliziyo kuza kanye nokuquleka, isiyezi, ubuhlungu, noma ukuphefumula okuncane.
Yimiphi imithi ejwayelekile yenhliziyo?
Uma udinga imithi yenhliziyo, kunamakhulu ongakhetha kuwo i-cardiologist yakho ongakhetha kuyo. Lezi yizona okuvame kakhulu imikhakha yemithi (nokuthi isebenza kanjani).
Abanciphisa igazi : Misa igazi ekunqandeni
Ama-antiplatelet agents (kufaka phakathi i-aspirin): Misa amaplatelet egazi ekunamatheleni ndawonye nasekwakheni amahlule
I-Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors: Nweba imithambo yegazi futhi usize ukugeleza kwegazi kalula futhi unciphise umfutho wegazi
Ama-Angiotensin II receptor blockers (ama-ARB): Misa ukucindezelwa kwegazi ekukhuphukeni
I-Angiotensin-receptor neprilysin inhibitors (ama-ARNIs): Hlukanisa izinto zemvelo ezingavimba imithambo yegazi
Abavimba be-Beta: Yenza inhliziyo ishaye kancane futhi iqine
Izivimbeli zesiteshi seCalcium: Misa i-calcium ekungeneni enhliziyweni nasemithanjeni yegazi futhi wehlise umfutho wegazi
Imithi ye-cholesterol: Kwehlisa amazinga aphezulu e-cholesterol
I-Digitalis: Yenza ukuqina kwenhliziyo kuqine
Izidakamizwa: Susa uketshezi oluningi emzimbeni
Ama-Vasodilators: Khulula imithambo yegazi futhi ulethe igazi eliningi ne-oxygen enhliziyweni futhi kunganciphisa nomfutho wegazi
Faka izinguquko zokuphila ngendlela enempilo ukuze uthuthukise ukusebenza kwemithi yenhliziyo. A ukungadli kahle nokuntuleka kokuzivocavoca umzimba kungakubeka engcupheni enkulu yesifo senhliziyo.
Yize izinkinga eziningi zenhliziyo zingenazo izimpawu eziyisixwayiso ezicacile, imvamisa kukhona ukwelashwa okutholakalayo. Uma ubona esinye salezi zimpawu ezingavamile kungenzeka kube nenkinga ngethikha yakho, ungalibali. Bona udokotela wakho, bese uthola ukuthi yini ongayenza ukuyelapha.
Isikali se-Adderall, amafomu, namandla
I-HIIT Workout Yaso Sonke Isikhathi
ukuthatha nini uhlelo b isinyathelo esisodwa
ungakuthola yini ukuvimbela inzalo kwamahhala kusuka kubuzali obuhleliwe
eyi-vicodin enamandla noma i-tylenol 3
kubiza malini ukuvakashelwa ngu-dr ngaphandle komshwalense
kufanele ngabe amazinga kashukela egazini kufanele abe ngamahora ama-2 ngemuva kokudla